Wasiirkii hore ee Amniga Puntland oo sheegay in 47 Ruux oo Alshabaab ah ay ku jiraan xabsiyada Puntland(Dhegeyso) | RBC Radio
Wasiirkii hore ee Amniga Puntland oo sheegay in 47 Ruux oo Alshabaab ah ay ku jiraan xabsiyada Puntland(Dhegeyso)
Posted on August 12, 2017 RBC, Wararka
Garowe-(RBC Radio)-Wasiirka Amniga Dowladda Puntland Cabdulaahi Yuusuf Dowlad iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaas Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa maanta xilka kula kala wareegay xarunta Wasaaradada amniga ee magaalada Garoowe.
Munaasabada xil wareejin oo ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiradda xilka la kala wareegayey,shaqaalaha wasaaradda iyo qaar kamid ah wasiiradda Puntland.
Wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo warbixin guud ka bixiyey wasaaradda iyo amniga Puntland ayaa sheegay in amaanka deegaanada Puntland uu yahay mid sugan oo aysan ka jirin wax dhibaato ah.
Qarjab waxaa uu soo hadal qaaday weerarkii Af-urur kadib howlgalo ay ka sameeyeen buuraha calmadow inay kaga dileen Alshabaab ku dhawaad 30 ka tirsan maleeshiyaadka Alshabaab.
Cabdi Xirsi ayaa sheegay in hada xabsiyada Puntland ay ku jiraan ilaa 46 ruux oo Alshabaab ah kuwaas isugu jira maxaabiis laga soo qabtay buuraha Calmadow iyo deegaanada kale ee Puntland,waxaana uu wasiirka cusub ka codsaday in sharciga la hor geeyo.
Wasiirka cusub ee Wasaaradda amniga Puntland Cabdulaahi Yuusuf Dowlad ayaa wasiirkii hore uga mahadceliyey sida wanaagsan ee uu xilka ugu wareejiyey,waxaa uu sheegay inuu xooga saari doono sidii amaanka Puntland uu u noqon lahaa midka ugu wanaagsan.
Halkaan Hoose ka dhegeyso Codka Qarjab.